Kuthengiswa ama-motors e-ABB, uhlu lwamanani entengo ye-abb motors, abasabalalisi be-abb motors, motor abb
Abasabalalisi bezimoto ze-ABB
Omunye wabasabalalisi nabathengisi be-ABB abahamba phambili abavela eChina
Thola ikhathalogi ye-abb motors kusuka, sithengisa ama-abb low voltage motors, abb high voltage motors, abb servomotors kanye ne-abb synchronous motors. Noma xhumana nathi ukuthola uhlu lwamanani we-abb motors, njengabathengisi bezimoto ze-abb abagunyaziwe nabasabalalisi bezimoto ze-abb, singakwenzela ukukhethwa kwezimoto ze-abb ngephepha ledatha ye-abb motor. Ukushayela kwe-abb kuyathengiswa, uma ufuna ukuthola umphakeli we-abb, i-motor abb, vele uxhumane nathi.
I-ABB motor M2BAX
I-ABB motor M2BAX uchungechunge lwesigaba semoto esine-asynchronous, uhlobo oluvundlile nolubheke phezulu 2 4 6 8 motor motor, Low voltage General performance motors, zilungele kangcono izinhlelo zokusebenza ezilula zokuklama. Ngekhwalithi yekilasi lokuqala le-ABB nokusekelwa okuqinile, imisebenzi yalezi zimoto ibonwa inani elikhulu lamakhasimende nama-OEM. Imoto ifinyelela ukusebenza kahle kwe-IE2. Usayizi wozimele kusuka ku-71-355, 0.18-355KW. Ama-motor motor we-M2BAX angamabheringi we-NSK angenisiwe, ama-brand brand SKF, wonke ama-motors afakwe ama-axial locking bearings ekugcineni kwe-D. Isigaba sokuvikelwa komkhiqizo i-IP55, ngenkathi ihlinzeka ngokwezifiso ze-IP56, IP65. Inikezela ngamalungiselelo amaningi wokukhethwa kwekhodi eguquguqukayo yezimoto ukuhlangabezana nezidingo zezindawo ezahlukahlukene.
I-ABB motors M3BP
uchungechunge lwe-abb motor m3bp, imoto esebenza kahle kakhulu, imoto yokonga amandla, imoto enobungane. Ukusebenza kahle: Amazinga we-European Class I wokusebenza kahle, · Amandla: 0.25-710KW (ngaphezu kuka-710KW angangeniswa ngenjini ye-M3BP), · I-Voltage: 220-690V, · Ingafakwa ngezinto eziningi ezifana ne-encoder, · Uhlelo oluzimele lokupholisa iyatholakala, · Inketho ejwayelekile noma eguquguqukayo yemvamisa yedrayivu, Amandla we-inverter drive> i-100KW, idinga ukufakwa ngamabhere wokuvikela, M3BP71, M3BP80, M3BP90, M3BP100 ； M3BP112, M3BP132, M3BP160, M3BP180 ； M3B200 M3B225 M3B250 M3 M280B3 M315B3 M355B3 M400BXNUMX MXNUMX MXNUMXB XNUMX MXNUMXBPXNUMX, MXNUMXBPXNUMX
I-ABB Motors MQAEJ
I-MQAEJ, i-QAEJ yochungechunge lwezigaba ze-asynchronous motor electromagnetic izigaba ezintathu kungumkhiqizo wokufaka esikhundleni sohlobo oludala lwe-MYUEJ nochungechunge lwe-YUEJ. Isakhiwo saso siyinhlanganisela yama-motor motor ama-QA kanye namabhuleki we-electromagnetic. Iyithuluzi elisebenzayo lokushayela ngesimanjemanje. Inezinzuzo zohla lwamandla amakhulu, isakhiwo esilula, umsindo ophansi, isikhathi esifushane sokubopha, ukusebenza kwe-braking okuthembekile, nobukhulu obufanayo bokufaka (ngaphandle kobude obugcwele). Kusetshenziswe okuningi emishini yokwakha izinkuni, i-power tranuction drive namathuluzi ahlukahlukene okusika insimbi, imigqa yokukhiqiza yezimboni ekhanyayo, imishini yendwangu, imishini yamakhemikhali, imboni yezokwakha, njll.
I-ABB Motors M2JA
Uchungechunge lwe-M2JA ABB motors-explosion-proof for Marine lwakhiwe ngamandla amakhulu, futhi ukusebenza kahle, isici samandla nesivinini semoto kuyahluka kancane ngaphansi kwezimo ezahlukahlukene zamandla.BT4 iqonde mpo i-CT4, 50Hz: 220-240V / 380-420V; 380-420V / 660-690V, △ / 丫. Ukuxhuma. · Usayizi wozimele we-B3 ngonyawo, ikepisi lokuphela ngaphandle kwe-flange, usayizi wozimele we-B5 ngaphandle konyawo, ikhava yokuphela nge-flange, isisekelo sikasayizi wohlaka lwe-B35 ngonyawo nesembozo sokuphela nge-flange. I-Usd yezimboni zikaphethiloli, igesi yemvelo nezamakhemikhali, kungakhiqizwa amagesi ahlukahlukene avuthayo noma umusi enqubeni yokukhiqiza. Isibonelo, izindawo zokuhluza zihlanganisa i-propane, butane, uphethiloli, i-ethylene ne-acetylene; nezitshalo zikamanyolo zine-ammonia, i-methanol, i-carbon monoxide negesi yamanzi.
I-ABB Motors M2QA
I-M2QA chungechunge i-ABB motors kagesi ine (3KW nangaphansi kwama-motors kagesi 220-240V / 380-420V, 4KW nangaphezulu, Power motor 380-420V / 660-690V, △ / Y) ububanzi bokuklanywa kwamandla kagesi, imoto isebenza ngokuvama okuhlukahlukene, Ukusebenza kahle, isici samandla, nejubane kuyashintsha kancane ngaphansi kwale mibandela.
I-ABB Motors QABP
I-QABP frequency frequency drivecontroled motor-phase asynchronous motor iyimoto eyenza ukuguquguquka kwemvamisa nokulawulwa kwejubane ngesiguquli semvamisa. I-motor isebenzisa isakhiwo se-squirrel-cage futhi ifakwe i-fan ekhethekile yokugeleza kwe-axial ukuqinisekisa ukuthi imoto inomphumela omuhle wokupholisa ngejubane elihlukile. Imoto idizayinelwe ngokukhethekile futhi yakhelwe izinhlobo ezahlukahlukene zokulawulwa kwejubane, futhi ingasetshenziswa kakhulu ezimbonini ezinjengemboni elula, indwangu, amakhemikhali, insimbi, amathuluzi emishini nezinye izitshalo zamandla wokulawula isivinini. Ubungako bokukhuphuka kwezinyawo nezincazelo zokuphakama kwesikhungo kuyahambisana nama-motors ochungechunge lwe-M2QA. Amandla alolu chungechunge lwama-motors avela ku-0.25KW-315KW, futhi ukuphakama kwesikhungo kwesisekelo kusuka ku-71mm-355mm.
I-ABB Motors QAMT
I-QAMT ihlanganisa ama-motor angenisa ama-phase-phase amathathu wemishini yengilazi. I-motor ye-serial ye-QAMT yenzelwe ngokukhethekile imishini yokufaka ingilazi ejulile. Ine-airproof enhle, futhi impahla yozimele isetshenziswa ngamandla aphezulu okusansimbi, i-SKF ethwele. Lokhu kuqinisekisa ukuthi imoto ingagijima ngokuthembekile ngaphansi kwesimo esinzima. I-motor ye-serial ye-QAMT ilungele imishini ehlukahlukene yokufaka ingilazi.
I-ABB Motors M3AA
Umkhiqizo: I-ABB Model: M3AA chungechunge Aluminium housing, 0.55KW-30KW; Umsuka: Uhlobo lwesakhiwo sokufakwa kweChina: Enye imodi yokuphakelwa kwamandla: Uhlobo lwe-AC lokuhambisa amandla: Isimiso sokusebenza semoto se-AC: Isakhiwo semoto esine-Asynchronous kanye nenqubo yokusebenza: Induction motor isivinini sokugijima: Isivinini esiqhubekayo sesigaba samandla emoto: Imodi yokusebenza kwemoto yesigaba ezintathu: Okunye ukusetshenziswa: Uhlobo lomsebenzi jikelele: Uhlobo lokuvikelwa kwezimoto zeDrayivu: Isigaba sokuvula okuvulekile: Isigaba F. Ukuvikelwa okujwayelekile kokuklanywa kwemoto yi-IP55, enikela ngezinga eliphakeme lokuvikelwa ngokuya ngezidingo zamakhasimende.Le moto ejwayelekile isebenzisa ukuhlukaniswa kweClass F ukukhulisa impilo yezimoto futhi ukwandisa ukuthembeka kwezimoto, ukusebenza kahle okuphezulu, iM3AA motor yenzelwe ukusebenza kahle okukhulu futhi ikhiqize ukonga amandla okukhulu.
I-ABB Motors M2JAX
I-M2JAX uchungechunge ukuqhuma-ubufakazi bezinyathelo ezintathu ze-asbchronous motors ze-ABB zakhiwa ngabakwa-ABB Motors Corporation besebenzisa ubuchwepheshe obusha bokuqhuma kwezimoto okuhlanganisa nobuqili kanye nokuhlanganisa izinkomba ezisezingeni eliphakeme laseChina ele-3836 2000-4-1 ejwayelekile. Njengamanje asetshenziswa efektri yasendlini yemikhiqizo yakwaClass 4 ukuqhuma-proof motors (Ex d C) (iThempeli leqembu TXNUMX-TXNUMX). Idizayini yokuzilolonga egcwele ngokuphelele.
Mayelana ne-ABB Motors kanye ne-mechanical inc
Ama-motors e-ABB ne-mehendi inc anikezela ngezinhlobo ezahlukahlukene zemoto kagesi ngokuya ngamazinga we-IEC ukufeza izidingo zezimboni ezahlukahlukene, kufaka phakathi ama-motors ajwayelekile, ama-motor frequency motors, ama-motor asolwandle, iziqhumane ezinikeza ubufakazi, ama-motors angaqali, ama-flue motors, amabili- ama-motor motors, ama-brake motors, nama-rotors angaphandle. Imoto, ikhanda lokugaya imoto. Ama-motors akhethekile angenziwa ngokuya ngezidingo zamakhasimende, zonke ezihlangabezana nezidingo eziqinile zamakhasimende ethu. Ngasikhathi sinye, inkampani inikezela ngemoto ebanzi enhlobonhlobo yokufakelwa okuhlukile kanye nezidingo ezihlukile zamandlavolumu kanye nemvamisa. Amakhasimende amakhulu enkampani i-OEM abalandeli bomoya abasebenza ngokushiswa komoya, imishini yamachweba kanye nama-cranes, amaphampu, ama-blowers, amathuluzi omshini, imishini yezindwangu, imishini yengilazi, owasolwandle, imishini yokusiza amandla, imishini yebhodi yesekethe nabanye abaholi bezimboni. Ukuhlanganiswa kwephrojekthi: isizinda samandla, uginindela kanye nephepha, i-petrochemical, i-metallurgy, umkhumbi, itheku, ukwakhiwa, usimende, isikhumulo sezindiza, njll. Njengamanje, i-45% yama-motors akhiqizwa yile nkampani athunyelwa kwamanye amazwe ngenethiwekhi yokuthengisa yamazwe i-ABB, ikakhulukazi Imakethe yaseYurophu.
Mayelana nekhathalogi ye-abb motors nephepha ledatha le-abb motor
Sinayo yonke ikhathalogi ye-abb motors esandleni sethu futhi uxhumane nathi ngephepha ledatha le-abb motor noma imidwebo yemoto ye-abb oyifunayo futhi sizokuthumela uma sesiyitholile.
Mayelana nabasabalalisi be-abb motors nabathengisi be-abb motors
Singomunye wabathengisi abagunyaziwe abavela kwa-ABB futhi singakunikeza sonke isitifiketi ukuze usisekele njengomsabalalisi we-abb. futhi ngokuqinisekile, wonke ama-ABB motors avela kithi ayiqiniso futhi ikhwalithi iqinisekisiwe.
Mayelana nokukhethwa kwezimoto ze-ABB nemininingwane ye-nameplate
Kunezici eziningi zokunquma ngqo ukuthi yimaphi ama-ABB motors azoba ngawona afanele kakhulu ekusebenziseni i-yur. Sizokwenza lokhu kukhetha. Okungeniswa kakhulu ukuthi kufanele usinikeze ngangokunokwenzeka ngemininingwane, ngokwesibonelo, ingabe isebenzisa idrayivu enezinhlelo zokusebenza ze-torque ezingapheli? Kwenziwa kanjani ukusebenza kokulawula ngejubane eliphansi? njll. Kukhona cishe yonke imininingwane yolwazi ku-abb motor nameplate.
Sakha ama-posibbility we-Creative
Ama-ABB motors ahlinzeka amakhasimende ngemikhiqizo nezinsizakalo ze-ABB ezisebenza kahle futhi ezinokwethenjelwa ngokuphathwa kahle kwazo nobuchwepheshe obuthuthukile. Ukusebenza kwamandla ka-ABB kusondele ku-100%, konga kuze kufike ku- $ 500,000 ngaphezulu. Ama-ABB motors enza ama-motors ethu azilungiselele manje asekelwa ngokulingana kwejubane, futhi futhi ne-voltage ephezulu yemoto ihlangana nekhwalithi ephezulu nokusebenza kwezindleko
Abakwa-ABB Motors kanye ne-generator abasetshenziselwa ukwakhiwa kwemikhumbi yezimboni zasemanzini
Imikhiqizo ka-ABB, izixazululo kanye nezinsizakalo zokwakhiwa kwemikhumbi embonini yezasolwandle engaqinisekisa ukusebenza okuhle kanye nokuthembeka ngisho nasezinsizeni ezifunwayo. Ukwakhiwa kwemikhumbi yethu kwemikhiqizo yezimboni zasolwandle kungahlangabezana nezidingo eziphakeme kakhulu zokuphepha nezemvelo, futhi inethiwekhi yethu yomhlaba wonke iqinisekisa ukuthi ungaphendula ngokushesha futhi noma nini lapho uyidinga khona.
I-ABB inikeza uhla oluphelele lwama-motors, ama-generator kanye nokuhanjiswa kwezicelo zasemanzini, kufaka phakathi i-induction kanye nama-motor ahambelanayo nama-generator, kanye nokushayela kwama-voltage aphansi naphakathi. Ukuhlangenwe nakho kwethu okubanzi komkhakha kusivumela ukuthi siqonde izidingo zamakhasimende ethu futhi asenzele umkhiqizo othembekile.
I-ABB Motors nejenaretha esetshenziselwa imboni yezimayini
Imboni yezokumbiwa phansi neyamaminerali ifaka imishini kagesi neyokusebenza ezimayini nasezakhiweni zokufaka ore ukuze kukhishwe futhi kusetshenzwe i-ore.
Umkhakha wezokumbiwa phansi wembulunga yonke uhlangabezana nokudidiyelwa okuholele ekutheni izinkampani ezimbiwa phansi zibe mbalwa futhi zincanyane kodwa zikhulu ukuba zibuse imakethe. Lezi zinkampani ezinkulu zamakhasimende zinebhizinisi nama-motors akwa-ABB ngoba ukusekelwa kwe-ABB kwemikhiqizo nezinsizakalo akunqunyelwe ezimayini. I-ABB futhi ihlinzeka nabalingani be-OEM ne-EPC ngemikhiqizo nezinsizakalo.
Izidingo zemikhiqizo ebalulekile zizoqhubeka zikhula, kepha ikhwalithi yezingcezu ezisele ze-ore izokwehla futhi ibe ngaphansi, okuzovumela izinkampani zezimayini ukukhuphula izinga lokukhulisa umkhiqizo ukuze zihlale zincintisana emakethe. Lezi zinkampani zezimayini zifuna ubuchwepheshe obuholayo kwa-ABB ukuze babasize bafinyelele ezinhlosweni zabo zokwenza ngcono ukwethenjwa, ukunciphisa ukusetshenziswa kwamandla, nokwandisa ukusebenza kwe-automation and mechanization. Imikhiqizo nezinsizakalo zeMotor ze-ABB zivame ukwedlula ukulindelwa kwamakhasimende futhi zingumlingani ofanele wezinkampani zezimayini zomhlaba.
Abakwa-ABB Motors kanye nama-generator we-petroleum, igesi yemvelo kanye nezimboni zamakhemikhali
Ngokuguqula ama-carbohydrate asemzimbeni nangamakhemikhali, izimboni zikawoyela, igesi nezamakhemikhali ziyahlangabezana nesidingo esikhulayo somhlaba wonke sokwenza ugesi, ukudla, indawo yokuhlala nokunakekelwa kwempilo. I-ABB iyaqhubeka nokukhulisa imali yayo kwezobuchwepheshe ukusiza izimboni zikawoyela, igesi nezamakhemikhali ukonga amandla, zisebenza ngokuphepha futhi zinciphise nomthelela emvelweni.
Ama-motors e-ABB anikeza uhla oluphelele lwama-motors athembekile, asebenza kahle kanye nama-frequency converter kuyo yonke imboni yamafutha, igesi neyamakhemikhali. Imikhiqizo yakwa-ABB yenzelwe umkhakha wezimboni, futhi ubuchwepheshe bawo bokuphathelene buqinisekisa isikhathi esengeziwe sokulungiswa kanye nokugcinwa okuncane. Isipiliyoni sethu semboni esibanzi sisivumela ukuthi siqonde izidingo zakho futhi umlingani wakho omethembayo.
Abakwa-ABB Motors kanye ne-Generator kwezimboni zokudla neziphuzo
Ama-ABB Motors asetshenziswa embonini yokudla neyiphuzo kudingeka ukuthi ahlangabezane nezidingo eziqinile, njengama-grinders, abaxubeki nabahambisi abasetshenziswe lapho kusenziwa inyama, izinkukhu, inhlanzi, ubisi nemikhiqizo yokubhaka. Ngasikhathi sinye, imishini esetshenziswa ekudleni nasekuphuzeni isiphuzo idinga ukungabi bunzima, ukusebenza isikhathi eside, kanye nokusebenza kwamandla okuphezulu kakhulu kuwo wonke umjikelezo wokuphila kwayo.
Ama-motors e-ABB anikeza uhla lwezisombululo zemoto ezifakazelwe, ezisebenzayo nezithembekile zomshini wokudla neziphuzo, kusuka ekuphatheni izinto ezingavuthiwe, ukucubungula inqubo nokulethwa ekufakweni kokudla nasekugcinweni ezindaweni ezinjengokulungiswa kwenyama nemikhiqizo yobisi. Hlangana nezidingo zomkhakha oqinile.
Ngisho nasezicelo ezifunwa kakhulu, imikhiqizo nezinsizakalo zakwa-ABB zisiza ukufezekisa amazinga aphezulu okusebenza kwamandla nokukhiqiza kuyo yonke inqubo. Ngezinto zokwakha ezikhethiwe kanye nobuchwepheshe obuphambili, ama-motors omkhakha wokudla nesiphuzo angahlangabezana nezingqinamba zaluphi uhlelo lwenqubo futhi asebenze ngokuthembekile nangokuqhubekayo.